My Brother Loves Me Too Much ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
Japan Movie လေးတွေ မတင်ဆက်ရတာ ကြာပြီဆိုတော့ … ကျောင်းသားအချစ်Fancy ဂျပန်ဇာတ်ကားလေးတကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော် …
ဆဲတိုခလို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ ဟရုခလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေး နှစ်ယောက်က ဇာတ်လမ်းအစမှာတင်မောင်နှမပေါ့ …
ဆဲတိုခ ကရည်းစားအရမ်းလိုချင်နေတဲ့ အရွယ် … သူ့အကိုဖြစ်သူဟရုခကလဲ သူ့ညီမကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပေးချင် အူတိုပုံလေးကချစ်စရာလေးတွေ …
ဆဲတိုခက ငယ်ငယ်တုန်းကကောင်လေးတွေကို သူကြိုက်နေကြောင်းတွေလိုက်ပြောနေကျ ပြောတိုင်းလဲအငြင်းခံရတယ် … သူအရွယ်ရောက်လာတော့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေက သူ့အကိုကြောင့် အနားကပ်မရ …
အဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေထဲမှာမှ အရန်မင်းသားကောင်လေးနှစ်ယောက်ဖြစ်သူ ချီအခိ နဲ့ တခနဲ ကလဲ ဆဲတိုခကိုကြိုက်ကြတယ်ပေါ့ …
အကိုဖြစ်သူကလဲမပေးချင် နဲ့ အဲ့နှစ်ယောက်ထဲက
တခနဲလို့ခေါ်တဲ့တယောက်က ဆဲတိုခ နဲ့ ဟရုခတို့ရဲ့မိသားလျို့ဝှက်ကိုသိနေတယ် … အဲ့လျို့ဝှက်ချက်ကိုဆဲတိုခ ကတောင် မသိ …
လျို့ဝှက်ချက်လေးကဘာလေးလဲ ? ဆဲတိုခကကော ဒီတသက်ရည်းစားရပါ့ဦးမလား ? ( ပြောရရင် Translator အစ်မကြီးလို တစ်သက်လုံး FA ဖြစ်နေလေမလား :3 ) ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းလေးမှာစီးမျှော်လိုက်ကြစို့နော် …
Rating အရ IMDb မှာ 6.5/10 ရရှိထားတဲ့ Family , Romance ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ …
ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံး မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်း အချောတွေဆိုတော့ Exam နီးနေတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသား Japan Movie ပရိသတ်တွေအတွက် စာကျက်ရတာ အမြင်ကြည်လင်အောင် မျက်စိလေးတွေ အစာကျွေးလိုက်ကြတာပေါ့ xD ….
Actors: Fuju Kamio, Ito Ono, Ryota Katayose, Takuya Kusakawa, Tao Tsuchiya, Yosuke Sugino, Yudai Chiba
Soliddrive.co Myanmar699 MB Download Openload.co Myanmar699 MB Download
Trailer: My Brother Loves Me Too Much ( 2017 )